Gabaasi Komiishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa loogii kan qabuu fi dhugaa kan dhokse akka ture Aministii Intarnaashinaal ibse.
Haalli itti mootummaan Itoophiyaa buqqaatota qabaa jiru ituu rakkoo hammeessaa jira jedha dhaabbanni gargaarsaa 'Refugees International'.
Filannoo Afriikaa Kibbaa: Sagalee lakkaa'amaa jiruun ANC'n dursaa jira
Filannoo Afriikaa Kibbaa keessatti filatamaa ture booda sagalee lakkaawameen paartiin amma biyya bulchaa jiru sagalee caalmaa argateera.
Gaazexeessaan BBC Danny Baker daa'ima maatii moototaatti qoose hojiirraa ari'atame
Gaazexeessaan BBC Danny Baker jedhamu daa'ima maatii moototaa suuraa chimpaanziitti fakkeessuun tuwiitara isaarratti waan maxxanseef hojiirraa har'ame.
Qabiinsa mirga namoomaan waggaa tokko keessatti Itoophiyaan hin himatamne
Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa waggaa tokko darbe keessatti Itoophiyaan qabiinsa mirga namooman hin himatamne jedhe.
Abbaan Alangaa Federaalaa Getaachoo Asaffaa himannaa sarbuu mirga namoonaatiif dabarsee akka kennuuf ajaja itti baasuulleen motummaan Naannoo Tigraay heyyamaa akka hintaanee himeera. Ofii bu'uurri seeraa motummaan federaalaa heeyyamaa fi beekamtii naannoo malee haalli itti namoota toa.annoo jala oolchuu ni jiraa?
Dhaabbati Mirga Namoomaaf falmu mootummaan Itoophiyaa lammiilee mana hidhaatti dararuudhaan miidheef beeenyaa kaffaluu qaba jedheera.
Ajjeechaafi darara lafa dhokataa biyya Buruundii kan keessa beeku waan saaxilu qaba.
Buruundii keessatti humni tikaa lammilee biyyattii darara hamaa dhoksaatti akka irraan ga'aa jiru saaxilame.
Dr Debretsiyoon G/Mikaa'el: 'Tarkaanfiin mootummaa saba tokko qofarratti kan xiyyeeffatedha'
Tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhataa jiru sarbama mirga namoomaafi malaammaltummaa bira darbe uummata rukutuutti deemaa jira jedhan Dr Debretsiyoon.
Godaantonni seeraan alaa Meeksikoorraa Ameerkaa seenaniif dawoon hin kennamuuf jedha ibsi mootummaa.